Intsingiselo ye-Enydro quartz. Ubucwebe njenge-pendant okanye umsesane wentengiso-ividiyo
tags I-Enhydro, Quartz
Intsingiselo ye-Enhydro quartz kunye neepropathi. I-Enhydro quartz yentengiso ingasetyenziselwa ubucwebe njenge-pendant okanye umsesane.
Inamabhabhathana amanzi abanjiswa ngaphakathi kwekrisimesi njengokuba ikhula. Awona matye anqabileyo zizinto eziqulethe iibhubhu ezihambayo, apho kukho ipokotho yomoya kwisikristali kwaye iqhuma elincinci lamanzi linokususwa liye phezulu nangaphantsi epokothweni. Ezinye i-empydro's zinamaqamza amanzi kuzo akumileyo kwaye azihambi.
Iipetroleum zokuphucula amanzi
Njengoko ubona emfanekisweni nakwividiyo, le khristali i idayim or petroleum quartz, wase-Afghanistan. Zonke zivela kumgodi omnye kodwa ezinye ziyi-quydz ye-quartz ngenxa yokuba kukho ulwelo olubonakalayo kunye nezinto ezivuthayo ezirhwexwa ngaphakathi kwekristali.
I-Quartz sisimbiwa esine-crystalline samaminerali eyenziwe nge-silicon kunye neeatom zeoksijini. Iiatom zidityaniswe kwisakhelo esiqhubekayo se-SiO4 silicon-oxygen tetrahedra, kunye neoksijini nganye ekwabelwana ngayo phakathi kwe-tetrahedra emibini, inika ifomula yemichiza ngokubanzi ye-SiO2. I-Quartz sesesibini esona mineral sisityebi kwi-world crust crust, emva kwe feldspar.
Intsingiselo ye-enhydro quartz kunye neepropathi zetemotshi
Amanzi ngaphakathi kwezi kristali agcinwe emsulwa kwizinto ezingcolisekileyo zongcoliso lwendalo yabantu. Oku kuyenza ibe yikristale efanelekileyo yokusebenzisa abo bafuna ubunyulu. Yiba bubunyulu bengqondo, umzimba okanye umphefumlo. La manzi ngokwenyani yi-elixir yobomi kwaye aqukethe konke ukucoceka kwecebo lobuthixo lobuqobo. Umntu unokucamngca ngezixhobo ze-Enhydro quartz ngokugxila ekunxibelelaneni neli cebo lobuthixo. Eli litye linika ikhonkco elicace gca nelithe ngqo kwiirekhodi zeAkashic.
Ukusebenza neli litye kulunge kakhulu ekucoceni nasekucoceni kwakheke ityhefu kuyo yonke inkqubo yomzimba. Ukusebenzisa le kristali kwifom ye-elixir kuququzelela amanqanaba anzulu wokuhlanjululwa komzimba kunye nokusebenza ngokomoya ngamandla acocekileyo wamandla e-kopydro.
I-Enhydro quartz evela e-Afganistan
Sithengisa ubucwebe ezenziwe nge-Enhydro quartz njengependant okanye iringi.